အဆင့်မြင့်ပရိုဖိုင်းဗွီဒီယိုသတင်းစာဆရာသည် MILLER AIR TRIPOD SYSTEM နှင့်အတူကွင်းဆင်းအစီရင်ခံစာများကိုစိန်ခေါ်မှုများ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အဆင့်မြင့်ပရိုဖိုင်းဗီဒီယိုသတင်းစာဆရာသည် MILLER AIR TRIPOD SYSTEM နှင့်အတူကွင်းဆင်းအစီရင်ခံစာများကိုစိန်ခေါ်နေခြင်း
New South Wales, သြစတြေးလျ, ဖေဖော်ဝါရီ 26, 2015-ဘယ်တော့လဲ The New York Times ဗွီဒီယိုသတင်းထောက်ယောနအမ် Kessel မကြာသေးမီကတရုတ်နိုင်ငံ၏အစိတ်အပိုင်းများအတွက်သတင်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနှင့်အတူတာဝန်ပေးဆောင်ရွက်စေခဲ့သည်, သူအပေါ်မှီခိုဖို့ရွေးချယ် Miller ကကင်မရာပံ့ပိုးမှုပစ္စည်းအဆိုပါကင်မရာကိုထောက်ခံမှုဖြေရှင်းချက်တီထွင်ဆန်းသစ်၏ထုတ်လုပ်မှု, နှင့်၎င်း၏ Air ကို tripod စနစ်အတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး။
"ငါသည်ကုန်သွယ်ရေးမှာအနည်းငယ်မော်ဒယ်များကိုစမ်းသပ်ခဲ့ကြပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည် 2012 ကတည်းကသီးသန့် Miller က tripod သုံးပြီးခဲ့တာဥရောပနှင့်အမေရိကရှိပြသထားတယ်" Kessel ကပြောပါတယ်။ "ငါသည်၌ငါ့အာရုံကျဉ်းမြောင်းပါတယ် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး အတိုပုံစံရုပ်ရှင်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရန်။ ငါခဏအတွက်တစ်ချိန်ကသတင်းရိုက်ကူးပြုကြလော့ Miller ကငါသည်သူတို့၏ပေါ့ပါးမော်ဒယ်အနည်းငယ်စမ်းအကြံပြုဒါသို့သော်ငါအများအားဖြင့်ဇာတ်ကြောင်းသုတစာပေကိုအပိုငျးပိုငျးဖန်တီးတစ်ကိုယ်တော်အော်ပရေတာအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ထိုအချိန်မှစ. ကျွန်မပြန်လှည့်ဖူးပါဘူး။ "
အဖြစ်မကြာမီ Kessel ပြည့်စုံပြေး-and သေနတ်စနစ်တစ်ခုတည်းအော်ပရေတာများကိုဒီဇိုင်း, အပေါ့ပါး Air ကို tripod စနစ်၏စကားလုံးကြားသိသကဲ့သို့, စျေးကွက်နှိပ်သူတဦးတည်းအပေါ်မိမိလက်ရခဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူကအဓိကအားဖြင့်မိမိအစီမံကိန်းများကိုများအတွက် Miller ကသံလိုက်အိမ်မြှောင် 20 tripod စနစ်ပေါ်တွင်မူတည်သော်လည်း, Air ကို tripod စနစ်ရဲ့သက်တမ်းနှင့်အသေးငယ်တဲ့ခြေရာအလေးချိန်ပိုကြီးတဲ့ပြဿနာဖြစ်လာရှိရာဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသများရှိ Kessel ရဲ့အစီရင်ခံတာဝန်တွေအပေါ်အထူးသဖြင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသက်သေပြ။ "ဒီ tripod နဲ့ခေါင်းကိုအမှန်တကယ်ပွီးမွောကျအမြားဆုံးစစ်မှန်တဲ့အရည်ခေါင်းကို tripod ဘို့အတော်လေးခဲယဉ်းသောအရာတစ်ကျောပိုးအိတ်၏အပြင်ဘက်မှသိုင်းကြိုးရန်လုံလောက်သောအသေးနေကြတယ်" ဟုသူကဆိုသည်။ "ဒါပေမဲ့ကျွန်မနေဆဲကျယ်ပြန့်စွမ်းရည်အတွင်းရိုက်ကူးနိုင်စွမ်းရှိသည်။ "
တရုတ်ရှိသူ၏မကြာသေးခင်ကအစီရင်ခံစီမံကိန်းများအတွက်, Kessel တစ်ဦးနှင့်အတူ Air ကိုတွဲ ကို Canon သူကမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်စတိုင်ရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကြှမျးကငျြစှာအလုပျလုပျဖို့ခွင့်ပြုအသေးဆုံးကင်မရာကပြောပါတယ်ထားတဲ့ EOS C100 ။ "အခြားသူများကိုမကြာခဏနည်းပညာပိုင်းသေးငယ်သော DSLR ကင်မရာ, ကိုးကားပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုငါတစ်လျော်သောဗီဒီယိုကင်မရာနှင့်တူ function ကိုအောင်သူတို့အပေါ်မှာအလုံအလောက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းသိုင်းကြိုးအချိန်ကိုအသုံးပြုပုံငါတကယ်ပဲပိုပြီးအစိတ်အပိုင်းများကိုဖန်တီး, မည်သည့်အခန်းကိုကယ်တင်ခြင်းသို့မရောက်ကြပါပြီ" ဟုသူကပြောပါတယ်။ "ဒီပေါ့ပါး Air နှင့် C100 combo ငါပညာရှင်ပီသစွာလုပ်ကိုင်နိုင်တော့မည်ဖို့လိုအပ်ဘယ်မှာငါအရပ်တွင်ကျယ်ပြန့်နယျလှညျ့နှင့်ပစ်ခတ်မှုလုပ်နေတာငါလာသောအခါအကြီးအလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမယ့်ငါ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရယ်နဲ့တူမကြည့် ဟောလိဝုဒ် အဲဒါကိုလုပ်နေစဉ်တွင်သင်္ဘောသား။ "
သူကလျင်မြန်စွာအတွက်နှင့်သူ၏နောက်ကျောမှခါးကသူ့တပြင်လုံးကိုကင်မရာကိရိယာအစုံနှင့်အတူအခြေအနေတွေထဲကရွှေ့နိုင်ပါတယ်အဖြစ်ထို့အပြင်အဆိုပါ Air ကို tripod စနစ်၏ကြံ့ခိုင် mobility, Kessel တစ်တစ်ကိုယ်တော်အော်ပရေတာအဖြစ်အရေးပါသောအားသာချက်ရရှိ။ "ဒါဟာထိုကဲ့သို့သောပေါ့ပါးပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ tripod စနစ်, ငါ့ကိုငါမကြာခဏတစ်ကိုယ်တော်အော်ပရေတာအဖြစ်တွေနဲ့ယှဉ်ပြိုင်တက်အဆုံးသတ်ခဲ့သူရုပ်မြင်သံကြားသမားတွေထက်အများကြီးပို mobility ခွင့်ပြုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ "
အဆက်မပြတ် on-the-go တစ်ဦးကသတင်းထောက်သည် Air လေကြောင်းလိုင်းနှင့်အတူ Kessel ရဲ့အနာဂတ်အစီအစဉ်များကိုဝေးသောအရပ်တို့ကိုမနှင့်စိန်ခေါ်မှုအခြေအနေတွေအတွက်စနစ်ဖြင့်ရိုက်ကူးပါဝငျဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ "ဒီခြေထောက်စူပါ, အလင်းသိုင်းကြိုး In-built နဲ့ကျွန်မအတူတူပင်စျေးနှုန်းအကွာအဝေးအတွင်းကြုံတွေ့င့်ကိုအခြား tripod ထက်ရိုးရိုး ပို. အဆင့်မြင့်နှင့်အတူသယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသောနေကြတယ်" ဟု Kessel အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ "ဒါ့အပြင်ဦးခေါင်းသည်၎င်း၏အရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့အဘို့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, မွှေးအစက်အပြောက်တာမျိုး။ ပြေး-and သေနတ်စိန်ခေါ်မှုနေရာများတွင်ရိုက်သည်ကိုသင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့အငြိမ့်နှင့်, ငါ့အဘို့, သော Miller က Air လေကြောင်းလိုင်းရဲ့ပေးနိုင်ပါတယ်သောအပေါ့ပါးဆုံးဖြစ်နိုင်သော option ကိုတွေ့ပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ "
post ကိုထုတ်လုပ်မှု 2015-02-27
ယခင်: အင်ဂျင်နီယာ Manager ကို -Netherlands, အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်မီဒီယာန်ဆောင်မှုများ
နောက်တစ်ခု: iPi ဖျ 16 ကို USB ကင်မရာများကို, လေး Kinect က2အာရုံခံခြင်းနှင့်သုံးမင်းသားခြေရာကောက်အဘို့ကို Motion Capture အထောက်ပံ့ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်